Calanka TV – 2016 – October
Warbaahinta oo lagu soo wareejiyay saldhigyadii ay weeraraeen Al-Shabaab ee Afgooye: VIDEO
Saraakiisha AMISOM iyo kuwa dowladda federalka ayaa warbaahinta shalay geeyay saldhigyadii ciidanka ee dhowrka ahaa ee ay isbuucii hore weerarka kusoo qaadeen Al-Shabaab.
by calanka —	October 26, 2016 —	Video
Trump oo taageerayaal ku qaabilay garoon diyaaradeed: SAWIRRO
Musharraxa madaxweyne ee xisbiga Jamhuuriga Donald Trump ayaa shalay kulan cajiib ah oo ka dhex dhacay garoon diyaaradeed oo lagu magacaabo Orlando Sanford International Airport kula qaatay qaar ka mid ah taageerayaashiisa
by calanka —	October 26, 2016 —	Sawirro
FRANCE: Xiritaanka kaamka Calais oo bilowday: SAWIRRO
Dowladda Fransiiska ayaa isbuucan bilowday xiridda kaamka qoxootiga ee loo yaqaan “The Jungle” kaas oo ku yaal gobolka Calais ee dalkaasi Fransiiska.
by calanka —	October 25, 2016 —	Sawirro
Qeybtii labaad ee ciidamada AMISOM ee Cadaado la geeyay: VIDEO
Waxaa shalay la geeyay magaalada Cadaado ee xarunta maamulka Galmudug cutubkii labaad ee ciidamo ka socda AMISOM. Cutubkan ayaa kasoo jeeda dalka Burunti. Ciidamada la geeyay Cadaado ayaa ka socda waddamada Jabuuti iyo Burundi.
by calanka —	October 25, 2016 —	Video
Diyaarad maanta ku dhacday Malta – 5 ku dhimatay: VIDEO
Diyaarad nooca yar-yar oo ay saaran yihiin shan ruux ayaa waxaa ay maanta ku dhacday jasiiradda Malta. Laurent Azzopardi ayaa isagoo gaarigiisa saaran duuban shilkan.
by calanka —	October 24, 2016 —	Video
Dowladda Fransiiska oo bur-burisay kaamkii qaxootiga ee Calais: SAWIRRO
In kabdan 1200 oo askari oo ka tirsan booliska dalka Faransiiska iyo saraakiil kale ayaa la filayaa in maanta ay billaabaan in ay kummanaanka qof ee qaxootiga ah ka saaraan xerada muhaajiriinta ee ku taala magaalada Calais ee dalkaasi.
by calanka —	October 24, 2016 —	Sawirro
INDONESIA: Qabiil dadka ka dhinta aasa iyaga oo taag-taagan: SAWIRRO
Qabiilka loo yaqaan Tana Toranjans ee dega dalkaasi Indonesia ayaa iyagu qabo dhaqan ka duwan kan dadka intiisa badan qabaan marka laga hadlayo dadka ka dhinta. Waxa ay ku xabaalaan buuraha dhagaxa ah oo ay iyaga oo taag-taagan geliyaan.
by calanka —	October 23, 2016 —	Jacbur, Sawirro
Trump oo ka cararay wareysi una hanjabay dumarkii fadeexeeyay: VIDEO
Donald Trump ayaa xamili waayay eedeynaha wali qul-qulaya ee ay dumar uu horay u hunguriyeeyay usoo jeedinayaan, waxaana uu iminka ugu hanjabay in uu sharciga la tiigsan doono kaddib marka ay dhamaato doorashada.
by calanka —	October 23, 2016 —	Video
MALEYSIA: Caalamka oo ka qeyliyay film qarsoodi oo laga duubay gabdho arday ah: VIDEO
Gabdho arday ah oo dhibta iskuul ku yaal gobolka Kuala Kangsar ee dalkaasi Mareysiya ayaa laga duubay film qarsoodiya oo muujinaya qaabta loo tabababro, iyadoon mas loogu geliyo balli biyo ku jiraan.
by calanka —	October 22, 2016 —	Video
QEYBTII LABAAD: Sawirrada silica soomaali ka marto tahriibka: SAWIRRO
Halkan waxaan idinkugu soo bandhigeynaa sawirrada qeybtii labaad ee “Silica soomaali ka marto tahriibka”. Sawirradan waxaanu ku iftiimineynaa halista tahriibku leeyahay.
by calanka —	October 22, 2016 —	Sawirro